Megenli ma doonayo xad dhaaf | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir14 BoluMegenli ma doonayo xad dhaaf
01 / 12 / 2019 14 Bolu, GUUD, Gobolka Banaadir, WADADA, TURKEY
megenliler ma doonayo marinka kore
Taargooyinka Yazıyaka iyo xaafada Türkbeyli waxay isku xirayaan barta ku saabsan dhismaha dariiqa aan caadiga ahayn ee Duqa Magaalada Turhan Bulut, iyadoo ay ka qeyb galayaan xubno ka socda Golaha Dowlada hoose iyo shacabkeena salaada jimcaha kadib war saxaafadeed ka dhan ah Masjidka Turkbeyli Divan. Muwaadiniinta ka qeybgalaysa war-saxaafadeedka ayaa muujiyay dareen-celinta xad-dhaafka la bilaabay.
War-saxaafadeed Duqa Turhan Bulut: , xawaaraha celcelis ahaan ee gawaarida ayaa kordhay marka loo eego kii hore. Iyadoo la tixgelinayo celceliska celceliska celceliska wadooyinka ee sanadlaha ah (YOGT) waa ku dhawaad ​​gawaarida 15 / maalintii iyo in% 4100 ee gawaaridan ay ka kooban yihiin gawaarida culus, wadadani waa mid aad khatar u ah nabadgelyada dadka lugeeya. Maamulka degmada, qaadista tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah fududaynta nolosha iyo amniga dadka ku nool degmada ayaa ka mid ah waajibaadkayaga mudnaanta leh.
Sababtaas daraadeed, ilaa 2011, wadaxaajood ayaa laga qabtay inta udhaxeysa Wadooyinka iyo Dowlada Hoose si loo dhiso lugeeyaha iyo isgoysyada gawaarida barta isku xirta Tabaklar Yazıyaka Neighborhood iyo Türkbeyli Neighborhood. 2014 / 1 / 23 / 05 / 2014 / 587 bilood ka dib taariikhda 4 ee aan xafiiska la wareegey bishii Abriil, waxaan ka codsanay Agaasinka Wadooyinka 25 dib-u-eegista iyo hirgelinta mashruuca marinka hoose. Waxaan ka helnay fikrado munaasib ah Agaasinka guud ee aasaaska si looga hortago mashruucu inuu saameyn ku yeesho Masjidka Divan. Kulamadaas oo dhami waxay bixiyeen natiijooyin wax ku ool ah iyo warqadda iyo mashruuca la ansixiyay ee ah in mashruuca marin-habaabinta ah ay oggolaadeen Agaasimaha Guud ee Wadooyinka Waaween loo diray Degmadeena iyadoo leh taariikhda loo yaqaan '07 / 2016 / 173988' iyo XNUMX.
Dhismaha marinka dhulka hoostiisa mara ayaa lagu soo daray barnaamijka maalgashiga, u diyaar garowga qandaraaska dhismaha, laakiin Wadooyinka waa weyn ayaa hakiyay dhismaha marinka. Waxaan u dirnay warqad leh xNUMX / 28 / 09 taarikhda iyo xarafka taariikhaysan ee 2017, oo ay kujirto codsi calaamad u sameynta isla gobolkaas. Annaga oo ah Dawlada Hoose ee Mengen, waxaan si joogta ah ula soconaa mashruuc hoosaadka iyo calaamadaynta, halka usbuucii la soo dhaafay 1455 Highways. Waxaan ogaanay in Agaasinka Gobolku uu dhisi doono meel ka sarreysa dadka lugaynaya. Daraasadeynteena, waxaan go'aansanay in dalabka gudbinta uu u gudbiyay Gudoonka Degmada Mengen loona soo gudbiyo Bolu Xeerarka '4 / 19 / 10' oo laga bilaabo halkaas una gudbiyo Agaasinka Wadooyinka 2018. Haddaan nahay degmada Mengen, ma codsaneyno xad-gudub ilaa iyo maanta waxaan kaloo tixgelinaynaa mashruuca xad-dhaafka ah in laga dhigo ilo qashin ah.
Ilaa maantadan, uma aan soo bandhigin xalka dadka lugaynaya iyo gawaarida aan ahayn marinnada ama calaamadaynta. Ma aqbali karno in codsigii uu sameeyay Xafiiska Gudoomiyaha Degmadu uu codsaday in lagu dhaqan galiyo Agaasinka Wadooyinka 4 anaga oo aan helin fikrada Dowlada hoose iyo in waraaqaha la sameyay sanado la ogolaaday. Waxaan rabnaa in la joojiyo mashruucan xad-dhaafka ah iyadoo la tixgalinayo duruufaha dhaqaale ee wadankeena.
Shaqaalaha Tareenka Ma rabo kala wareejinta
Ka gudubka Xuduudda Saldhigga Ha Ku Gudbaan!
23 Cutubyada ka hooseeya / Gudbidda ee Heerka Kala Gudubka Heerka koowaad ee mashruuca Baadhis
Mashruuc hoos-hoosaadka ah ee Mashruuca Heerka Xuddunta ah ayaa loo furay baqshiinka maaliyadeed ee hindisada loogu talagalay diyaarinta mashruuca
Mashruuca 23 Mashruuca Xadka Mashruuca ka-soo-degsan / ka hooseeya
23 unug oo ka hooseeya / Gudbitaanka ee Mashruuca Isugeynta Heerka…
Ogeysiinta Udhanka: Gudbinta xad-dhaafka ayaa la dhisi doonaa (Uluk Crossla Heerka Gudbitaanka xad dhaafka ah ee fikirka
Mashruuca Megen overpass
Taargooyinka Yazıyaka Deriska
Yeniçağa Mengen-15th Gobolka Xuduudaha Gobolka Xuduudaha